यसकारण युवाहरु झन् बढी संक्रमित हुँदै | Nepal Ghatana
प्रकाशित : २४ श्रावण २०७७, शनिबार ०८:१३
युवामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुन्छ भनिन्छ। तर, यही उमेरसमूहका व्यक्ति कोरोनाबाट बढी संक्रमित छन्। २१ देखि ३० वर्ष उमेरसमूहमा संक्रमण ३९.९ प्रतिशत छ। दोस्रोमा ३१ देखि ४० वर्ष उमेरमा संक्रमण २३.५ प्रतिशत छ।
एकापसमा घुलमिल हुने कारण पनि युवामा बढी संक्रमण देखिएको विज्ञको भनाइ छ। यस्तै, असुरक्षित तवरमा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका कारण पनि संक्रमण फैलनमा सहयोग पुगेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा लापरवाही देखिएको डा. तिवारीको भनाइ छ। ‘मास्क नलगाएको र भौतिक दूरी कायम नगरेको पो हो कि ? जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेको पो हो कि ? ’, उनले प्रश्न गरे।
युवामा कोरोना संक्रमण भए पनि सञ्चो भइहाल्छ भन्ने सोच हावी देखिएको डा. प्याकुरेलको भनाइ छ। ‘लकडाउन उल्लंघन गर्ने, पास दुरुपयोग गर्ने, सुरक्षात्मक मापदण्ड प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति छ’, उनले भने, ‘लक्षण पनि देखिएको छैन भने आफू संक्रमित भएको थाहै पाउँदैनन्। झन् धेरैलाई कोरोना भाइरस सार्ने जोखिम हुन्छ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।